Yiziphi izindlela zokukhokha ozamukelayo? I-LC ngokubona / nge-TT, i-30% ye-Deposi kanye nebhalansi engu-70% iphikisana namakhophi wemibhalo yokuthumela i-witinin izinsuku zokusebenza ezingu-7. Ungawukhipha kanjani umatilasi ogoqiwe? 1.Beka ikhathoni endaweni eyisicaba ekamelweni lakho, khipha umatilasi ngokucophelela ubeke phezu kombhede wakho. 2.Sika ngokucophelela isikhwama sangaphandle ngesikelo uqinisekisa ukuthi awusiki upulasitiki omubi ngaphakathi noma umatilasi, ungamangaleli ummese. 3.Goqela umatilasi ovalwe ngevacuum phezu kombhede wakho 4.Sika ngokucophelela isikhwama sepulasitiki eduze kwewashi njengoba umatilasi uqala ukuwohloka ngokushesha,Susa isikhwama sepulasitiki. 5.Vumela amahora angu-24 ukuze umatilasi wakho omusha ukhule ngokugcwele.Ngingakwazi yini ukuvakashela imboni yakho? Yebo, siyakwamukela ukuvakashela imboni yethu nganoma yisiphi isikhathi, siseduze nesikhumulo sezindiza samazwe ngamazwe sase-Guangzhou Baiyun, kuthatha ihora elilodwa nje ngemoto, futhi singahlela imoto ukuthi ikulande.
Ngokuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle kakhulu okukhiqiza, kanye nenkonzo ephelele, uRayson uyahola embonini manje futhi usabalalisa iRayson yethu emhlabeni wonke. Kanye nemikhiqizo yethu, izinsiza zethu nazo zihlinzekwa ukuze zibe sezingeni eliphezulu. vispring regal superb Njengoba sizinikele kakhulu ekuthuthukisweni komkhiqizo nasekuthuthukisweni kwekhwalithi yesevisi, sesizakhele igama eliphezulu ezimakethe. Sithembisa ukunikeza wonke amakhasimende emhlabeni wonke isevisi esheshayo nechwepheshile ehlanganisa ukuthengisa kwangaphambili, ukuthengisa, nezinsizakalo zangemuva kokuthengisa. Kungakhathaliseki ukuthi ukuphi noma yiliphi ibhizinisi ohlanganyela kulo, singathanda ukukusiza ukuthi ubhekane nanoma iyiphi inkinga. Uma ufuna ukwazi imininingwane eyengeziwe mayelana nomkhiqizo wethu omusha i-vispring regal superb noma inkampani yethu, zizwe ukhululekile ukusithinta.Abantu bazowuthanda kakhulu lo mkhiqizo njengoba bengathola ukuthi ungabamba umbala wawo iminyaka eminingana ngaphambi kokuba uqale ukufiphala.